आज नेकपाले तराई सीमामा भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध के गर्दैछ ? | Namastepost.com
आज नेकपाले तराई सीमामा भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध के गर्दैछ ?
काठमाडौं, असोज ४ : देउवा सरकार देशमाथि वैदेशिक हस्तक्षेप र नागरिकको पीडा समस्याबारे मौन रहेको बेला नेपाल कम्युनिस्ष्ट पार्टी ९नेकपा०ले तराई क्षेत्रका सीमा डुबान र समस्याबारे नयाँ धारणा सार्वजनिक गर्दैछ ।
त्यसविरुद्ध देशभित्र व्यापक विरोध जारी छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले खरो रुपमा सहमतिको विरोध गरिरहेको छ । उसले सडक प्रदर्शन समेत गरेर विरोध जारी राख्दै बुधबार ‘नेपाल भारत सीमा समस्या र डुबान’ शीर्षकमा उक्त कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेको हो । सीमानामा ८३ ठाउँमा भारतले सीमा मिचेर नेपाली बस्ती र भूमि आफूतिर गाभिसकेको तथ्यांक बाहिर आइसकेको छ । त्यसविरुद्ध पनि नेकपाले आज धारणा बाहिर ल्याउने भएको छ ।
यसै विषयमा नेकपाको अन्तर्राष्ट्रिय ब्यूरोले आज बुधबार राजधानीमा उक्त एक बृहत् अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरी धारणा सार्वजनिक गर्दैछ । कार्यक्रम अपरान्ह १२ बजे कमलादीस्थित प्रज्ञा भवनमा हुने नेकपा अन्तर्राष्ट्रिय ब्यूरो कार्यालय सदस्य खगेश्वर केसीले बताए ।
कार्यक्रममा विभिन्न पार्टीका विज्ञ प्रतिनिधि, सीमानविद् तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनविद्हरुले बोल्नेछन् । कार्यक्रममा सहभागी हुन नेकपाले सबैलाई अपिल गरेको छ । ब्यूरो ईन्चार्ज धर्मेन्द्र वास्तोला ‘कञ्चन’ले नेपाल–भारत तराई सीमा समस्याप्रति नेकपा गम्भीर रहेको र यसको दीर्घकालीन समाधानबारे पार्टीले जनताको साथ लिई पहल जारी राखेको बताए ।
नेकपा सीमा क्षेत्रमा भारतले बढाउँदै लगेको ज्यादातिविरुद्ध निरन्तर संघर्ष गर्दै आइरहेको पार्टी हो । भारतले बनाएको बाँध खुला नगरे ‘बम हान्ने’ चेतावनी नेकपाले पटकपटक दिँदै आएको छ । तराई डुबानका बेला सामाजिक सञ्जालमा ‘कोसी ब्यारेजमा बम हान्न’ नेकपालाई गुहार्ने क्रम व्यापक मात्रामा हुँदै आएको छ ।
देशभक्त तथा राष्ट्रवादीहरुलाई कार्यक्रममा सहभागिताका लागि ब्यूरोले आह्वान समेत गरेको छ ।